Sekusemome ngesithembu sabesifazane kuleli - Ilanga News
Home Izindaba Sekusemome ngesithembu sabesifazane kuleli
Sekusemome ngesithembu sabesifazane kuleli
Kufakwe isicelo sokuba bakwazi ukugcagca namadoda amaningi
BAZOZITHOLA be-phakathi komhla-ne nembeleko abesifazane base-Ningizimu Afrika njengoba kuli-ndeleke ukuba uhulumeni waku-leli uphasise umthetho obavumela ukuthatha isithembu okubizwa ngokuthi yi-polyandry ngolwase-mzini.
Lokhu kuzobe kubenza bafane nabesilisa okumanje umthetho wa-kuleli uyabavumela ukuthi banga-thatha amakhosikazi noma ngabe mangaki. Uma lo mthetho uphasiswa, nabesifazane ngokunjalo sebezovumeleka ukuzitamuzele nje kwabesilisa, baganwe ngoku-thanda kwabo.
Njengamanje uMnyango weza-seKhaya kuzwelonke oholwa ngu-Dkt Aaron Motsoaledi, ufake lesi sicelo ukuba sibe ngesinye sezi-bhekwayo noma eziphasiswayo ngaphansi kwemithetho yezemishado ngaleli sonto. Lo mnyango uthi ufisa kufakwe umthetho omusha ngaphansi kweMarriage Act, zonke izinhlobo zemishado zivu-meleke ukuba semthethweni.
Lokhu kuhlanganisa nezinhlobo zemishado ethathwa njengenge-kho emthethweni, phakathi kwayo kukhona owenkolo yamaHindu, amaJuda, amaMuslim nowenkolo yamaRasta. Lo mqingo wesicelo kuthiwa uphakamisa ukuba le mi-shado nayo ibonakale njengese-mthethweni.
“Ukungathathwa kwale mishado njengesemthethweni kukhombisa ukucindezela abathile,” kusho lo mqingo obizwa nge-Green Paper.
UDkt Motsoaledi uqale waba ne-mihlangano nezinhlaka ezahlukene kuhlanganisa abelaphi benda-buko, abaholi bezenkolo, izifundi-swa nabezinhlaka ezahlukene, ku-balwa nabathandana nobulili obufanayo.
Izishoshovu kuthiwa ziveze ukuthi isithembu sabesifazane kumele sibe semthethweni njengohlobo oluthile lomshado. Ngesikhathi kukhulunyiswana nezinhlaka eza-hlukene, kuthiwa abelapha nga-makhambi esintu bakhombise ukungakuthakaseli ukuthatha isithembu kwabesifazane.
Previous articleUbusongelwa umndeni oqothelwe amadodana
Next articleKusamisiwe ukungenelela kukahulumeni endlunkulu kazulu